ဆိုလာရီရဲ့ အရည်အသွေးကို သေချာပေါက်အသိအမှတ်ပြုရမှာပါ
ဆိုလာရီ Santiago Solari ဟာ ဇီဒန်း Zidane နောက်တစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာလား
8 Nov 2018 . 2:11 PM
ဆန်တီယာဂိုဆိုလာရီ Santiago Solari အပေါ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲသင့်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီလား။ လူငယ်အသင်း နည်းပြတစ်ဦးအတွက် ရလဒ်တွေဆိုးရွားနေတဲ့ ရီးယဲလ်စီနီယာအသင်းကို ကိုင်တွယ်ခွင့် ရခဲ့တာဟာ ဂုဏ်ယူစရာလို့ ပြောနိုင်သလို၊ တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ဖိအားတွေအပြင် သူ့ရဲ့ဘ၀တက်လမ်းပါ ထိခိုက်နိုင်မယ့် အကြောင်းအရာတွေက စောင့်ကြိုနေတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဆိုလာရီဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ သူ့အပေါ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သံသယမျက်လုံးတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ချေဖျက်ပြနေပြီ။ ရီးယဲလ် ယာယီနည်းပြဘ၀မှာ (၃)ပွဲ ကိုင်တွယ်ထားပြီး (၃)ပွဲနိုင် ပေးဂိုးမရှိအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။
ပထမဆုံးပွဲမှာ Melilla ကို (၄)ဂိုးပြတ်၊ ဒုတိယပွဲမှာ ဗယ်လာဒိုလစ်ကို (၂-၀)၊ တတိယမြောက်ပွဲမှာ ပါလ်ဇန်ကို (၅)ဂိုးပြတ် စတဲ့ ရလဒ်တွေဟာ ဆိုလာရီအတွက် အနာဂတ်ရှေ့ဆက်ဖို့ ခွန်အားတွေပါပဲ။ အသင်းငယ်တွေနဲ့ တွေ့လို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေက ဆိုလာရီရဲ့ အရည်အသွေးကို နိမ့်ချသလိုဖြစ်စေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရီးယဲလ်က စိတ်ဓာတ်ပျက်၊ စုစည်းမှု ကင်းမဲ့နေချိန်ဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုအသင်းကို အတွေ့အကြုံ လုံလုံလောက်လောက် မရှိ၊ ပြင်ဆင်ချိန်မရှိဘဲ ကိုင်တွယ်ခဲ့ရချိန်မှာ (၃)ပွဲဆက် ပေးဂိုးမဲ့ နိုင်ပွဲရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆိုလာရီရဲ့ အရည်အသွေးကို သေချာပေါက် အသိအမှတ်ပြုရမယ်။
အခုဆိုရင် ဆိုလာရီဟာ ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံး(၃)ပွဲဆက် ပေးဂိုးမရှိဘဲ နိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက်နည်းပြ အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီ။ ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး(၃)ပွဲဆက် အနိုင်ရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူက Luis Carniglia ဖြစ်ပြီး ၁၉၅၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့အတူ စံချိန်တင် အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့ဖူးတဲ့ ဇီဒန်း Zidane တောင် ဆိုလာရီလို မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဇီဒန်းတုန်းကလည်း ရီးယဲလ်အသင်းကို စကိုင်တုန်းက ဘယ်သူမှ အထင်မကြီးခဲ့ပေမယ့် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ပြခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား (၃)ကြိမ်အပါအ၀င် ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။ ဆိုလာရီဟာ ဇီဒန်း နောက်တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ဖို့ စောလွန်းပေမယ့် ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်း ယတိပြတ် မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆိုလာရီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေအရ သူ့ကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး စောင့်ကြည့်သင့်တယ်လို့တော့ ယူဆမိပါတယ် . . .
Photo:RTVE,Premier League,Managing Madrid,Goal.com
ဆိုလာရီ Santiago Solari ဟာ ဇီဒနျး Zidane နောကျတဈယောကျ ဖွဈလာမှာလား
ဆနျတီယာဂိုဆိုလာရီ Santiago Solari အပျေါ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမွငျတှေ ပွောငျးလဲသငျ့ဖို့ အခြိနျရောကျလာပွီလား။ လူငယျအသငျး နညျးပွတဈဦးအတှကျ ရလဒျတှဆေိုးရှားနတေဲ့ ရီးယဲလျစီနီယာအသငျးကို ကိုငျတှယျခှငျ့ ရခဲ့တာဟာ ဂုဏျယူစရာလို့ ပွောနိုငျသလို၊ တခွားတဈဖကျမှာလညျး စိနျချေါမှုတှေ၊ ဖိအားတှအေပွငျ သူ့ရဲ့ဘဝတကျလမျးပါ ထိခိုကျနိုငျမယျ့ အကွောငျးအရာတှကေ စောငျ့ကွိုနတေယျ။ အခုအခြိနျမှာ ဆိုလာရီဟာ စိနျချေါမှုတှေ၊ သူ့အပျေါ စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ သံသယမကျြလုံးတှကေို တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ခဖြေကျြပွနပွေီ။ ရီးယဲလျ ယာယီနညျးပွဘဝမှာ (၃)ပှဲ ကိုငျတှယျထားပွီး (၃)ပှဲနိုငျ ပေးဂိုးမရှိအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့တယျ။
ပထမဆုံးပှဲမှာ Melilla ကို (၄)ဂိုးပွတျ၊ ဒုတိယပှဲမှာ ဗယျလာဒိုလဈကို (၂-ဝ)၊ တတိယမွောကျပှဲမှာ ပါလျဇနျကို (၅)ဂိုးပွတျ စတဲ့ ရလဒျတှဟော ဆိုလာရီအတှကျ အနာဂတျရှဆေ့ကျဖို့ ခှနျအားတှပေါပဲ။ အသငျးငယျတှနေဲ့ တှလေို့ပါဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှကေ ဆိုလာရီရဲ့ အရညျအသှေးကို နိမျ့ခသြလိုဖွဈစတေယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ရီးယဲလျက စိတျဓာတျပကျြ၊ စုစညျးမှု ကငျးမဲ့နခြေိနျဖွဈပွီး အဲဒီလိုအသငျးကို အတှအေ့ကွုံ လုံလုံလောကျလောကျ မရှိ၊ ပွငျဆငျခြိနျမရှိဘဲ ကိုငျတှယျခဲ့ရခြိနျမှာ (၃)ပှဲဆကျ ပေးဂိုးမဲ့ နိုငျပှဲရအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့တဲ့ ဆိုလာရီရဲ့ အရညျအသှေးကို သခြောပေါကျ အသိအမှတျပွုရမယျ။
အခုဆိုရငျ ဆိုလာရီဟာ ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံး(၃)ပှဲဆကျ ပေးဂိုးမရှိဘဲ နိုငျပှဲရခဲ့တဲ့ ဒုတိယမွောကျနညျးပွ အဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွီ။ ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးမှာ ပထမဆုံး(၃)ပှဲဆကျ အနိုငျရအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့သူက Luis Carniglia ဖွဈပွီး ၁၉၅၇ ခုနှဈက ဖွဈပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့အတူ စံခြိနျတငျ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့ဖူးတဲ့ ဇီဒနျး Zidane တောငျ ဆိုလာရီလို မစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ဘူး။ ဇီဒနျးတုနျးကလညျး ရီးယဲလျအသငျးကို စကိုငျတုနျးက ဘယျသူမှ အထငျမကွီးခဲ့ပမေယျ့ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျရညျပွခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျဖလား (၃)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့တာပဲမဟုတျလား။ ဆိုလာရီဟာ ဇီဒနျး နောကျတဈယောကျလို့ သတျမှတျဖို့ စောလှနျးပမေယျ့ ဖွဈမလာဘူးလို့လညျး ယတိပွတျ မပွောနိုငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဆိုလာရီရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှအေရ သူ့ကို အခြိနျအတိုငျးအတာ တဈခုသတျမှတျပွီး စောငျ့ကွညျ့သငျ့တယျလို့တော့ ယူဆမိပါတယျ . . .